လွဲချက်ကယ်မနာ.. missing not bad | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » လွဲချက်ကယ်မနာ.. missing not bad
လွဲချက်ကယ်မနာ.. missing not bad
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 13, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 8 comments
တောက်စ်… (အရီးလတ် တောက်ခေါက်သံ မဟုတ်ပါ)။ ဂေဇက်ရွာ သူရဲကောင်း ကြောင်ကြီး၏ မချိတင်ကဲ ဝမ်းခေါင်းတွင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသံဖြစ်သည်။ သူ့အား လဒငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗဲလ်ဆု ချီးမြှင့်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ရပ်သိရွာသိ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်ထားပြီးမှ ဥလောဘအဖွဲ့အား ပေးလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မပေးချင်လဲ မပေးပါနဲ့လား၊ အခုတော့ ဆန်ကာတင် ငါးယောက်ထဲ ပါသလေး ဘာလေးနှင့် အခုတော့ အပျက်ပျက်နှင့် နှာခေါင်းသွေး ထွက်ရပြီ။ ကြောင်ကြီးခါးတွင် ပစ္စတိုမချိတ်ထား၍လော သို့တည်းမဟုတ် အဘအစား သမဒဂျီး ဟု လေစားသမှု ခေါ်ဆိုခြင်းကို အရာကျပြီး မှတ်ထင်မှား၍လော၊ ဘာလော ညာလော မာရှယ်လောလောက် မနိပ်တော့သည်မှာတော့ ဧကန်ဖြစ်ကြောင်း ယခုပင် မြက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရပြီ မဟုတ်ပါလော။ ထို့ကြောင့် ခြံထဲမြက်အပြောင် မရှင်းသူ လုံခြုံရေးမှူး မှိုဗူးကြီးအောင်ပုအား (တရုတ်မနိုင် ကြေးမုံဂျီးမဲ) အရာချလိုက်သည်။ “ဗိုလ်ပု မင်းကိုနေရာ ပြောင်းလိုက်ပြီ၊ ဒီနေ့ကစပြီး အာမီရမ်ဂိုထောင်အစောင့် လုပ်တော့။” စူဠလိပ်ကိုမှ ရေထဲ လွှတ်မိချေပြီ။ ဘပုကား နှပ်လေးတရှုံ့ရှုံ့ အပြင်ပန်း ဝမ်းနည်းသယောင်နှင့် ဝမ်းထဲတွင် ကုလားဘုရားပွဲလှည့် နေတော့သည်။
နိုဗဲလ်ဆုနှင့် လွဲရသည့်အကြောင်းကို စုံစမ်းရာ တရုတ်သူလျှို တဦး၏ စနက်မကင်းကြောင်း အတွင်းသတင်း ရလေသည်။ ဆုပေးရေး ဘုတ်အဖွဲ့မှာ တညီတညွတ်ထဲ မဲခွဲ အတည်ပြုခါနီးတွင် ကြေးမုံဂျီးဆိုသူမှ တရုတ်ပြည် ကူမြူနစ်ပါတီ အရှိန်အဝါသုံးလျက် ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ ကြောင်ကြီးသည် ငြိမ်းချမ်းရေးသမား မဟုတ်ကြောင်း၊ သက်သေအနေဖြင့် ဂေဇက်ရွာတွင် သူ့အား ထိကပါး ရိကပါး စောင်းမြောင်းချိတ်ဆို ရေးသားသည့် စာများစွာ ရှိကြောင်း၊ သူ့ကြောင့် တရုတ်အနေနှင့် မတတ်သာသည့်အဆုံး ညူကလီးယားဗုံး သုံးကောင်းသုံးရနိုင်ကြောင်း မျက်နှာထိ မျက်နှာထား မျိုးစုံဖြင့် ပလီစိချောက်ချက် ပြောဆိုလေရာ ဆုပေးရေးအဖွဲ့မှ ညူကလီးယားဗုံးကွဲမှု ကြားချောင်တရားခံ အဖြစ်ခံရမည့်အရေး စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီး ကြောင်ကြီးအား ဆုရှင်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တောက်စ်… ဒုတိယပ္မိ တောက်ခေါက်သံဖြစ်သည်။ “သိကြသေးတာပေါ့ ကြေးမုံဂျီးရာ၊ ကြောင်ကြီးဘာကောင် ဆိုတာ ပြာသိုလရောက်ရင် သိစေ့မယ်။ ငါ့မှာတော့ ဆုရမလားဆိုပြီး ကြွက်မခုတ် ငါးမဖမ်းဘဲ သက်သတ်လွတ် စားပြ အငတ်ရတာ အလကားဖြစ်ပြီပေါ့။ ကြောင်သူတော်လို့ သူများမေးအငေါ့ ခံရတာ အဖတ်တင်တယ်။ လုံးဝ ကျေနပ်ဘူးဟေ့၊ သွားဝယ်စမ်းကွာ ကြက်ကင်ကြီး.. ဝက်ကင်ကြီး ဘဲကင်ကြီး ငါးကင်ကြီး… ကြေးမုံဂျီအမှတ်နဲ့ အရိုးပါမကျန် စားပစ်မယ်။ ဗိုက်ဝသောအခါ ဦးကြောင်ကြီး ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝါဒီများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ တောရိုင်းသဘာဝ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စီမံချက်ကို ကြေးမုံဂျီးအိမ်အနီး ရေးဆွဲလေသည်။ ထိုဥပဒေအရ ပတ်ဝန်းကျင် ဂေဟစနစ် ဖျက်ဆီးနှောင့်ယှက်သူအား သေဒဏ်အထိ အပြစ်ပေး အရေးယူနိုင်သည်။
ထို့နောက် ကြောင်အကောင်ရေ တသိန်းတိတိအား ကြေးမုံဂျီးနေအိမ်နှင့် သူသွားလာတတ်သည့် နေရာတိုင်းတွင်ထားကာ မိုင်းဗုံးအပျော့၊ မိုင်းဗုံးအပြင်း၊ မိုင်းပဒေသာများထောင်၍ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ညဖက်တွင် ကြောင်များမှ တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့အလိုက် အရပ်ဆယ်မျက်နှာ (ဘေးပတ်လည်၊ သစ်ပင်ပေါ်၊ အိပ်ခေါင်မိုးပေါ်၊ မြေအောက်ကျင်း) လော်စပီကာများဖြင့် ပြာသိုလ ကြောင်စစ်ချီတေးသံ သံပြိုင်ဟစ်ကြွေးကြရမည်။ တပြိုင်နက်ထဲ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအား လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများအဖြစ် ခန့်အပ်ပြီး ကြေးမုံဂျီး၏ တန်ပြန် လှုပ်ရှားမှုများ ဥပဒေနှင့်ညီမညီ ဆုံးဖြတ်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ကြေးမုံဂျီးမှာ အပြင်ရန်သူဖြစ်၍ လုပ်ကြံရ လွယ်ကူသော်လည်း အတွင်းရန်သူကား ထင်သလောက် မလွယ်ချေ။ ထိုသူကား သဂျီးဦးခိုင်ဖြစ်သည်၊ ကြောင်ကြီး ဆုရမည် သတင်းပြေးစဉ် ကိုရင်ကြောင် ကိုရင်ကြောင်ဖြင့် နှုတ်မှ တသသဖြင့် ရှိထားခဲ့သော်လည်း ဆုမရသည့်အခါ အလကားငကြောင် မျက်နှာသာပေး ရွှေရေးပန်းကန်တက် ဖြစ်သည်ဆိုကာ မျက်နှာလွဲ ခဲပစ်လုပ်တော့သည်။ ယခင်ကလို သမီးဒေါ်ဂလေးနှင့် တွေ့ဖို့ဝေးစွ အိမ်အရိပ်ပင် အနင်းမခံချေ၊ ခြံဝတွင် ဧရာမခွေးဂျီးတဂေါင် အစောင့်ချထားသည်။ လေလှိုင်းမှ ကြောင်အော်သံ မကြားစေရန် သမီးဒေါ်ဂလေးအား အိုင်ပက်ဒ်သရီး၊ အိုင်ဖုံးဖိုက်ဗ် အသစ်စက်စက်များဖြင့် ဂိမ်းဆော့ သီချင်းနားထောင် အာရုံ လွှဲစေရာ ကြောင်ကြီးခမျာ အသီးကွဲ ဝေဒနာ ကြီးစွာခံစားနေရတော့သည်။
ထိုသို့ အဆင်မပြေလေ ကြောင်ကြီးဒေါသကား ကြေးမုံဂျီးသို့ ပုံကျလေဖြစ်သည်။ “ကြေးမုံဂျီး မင်းကို တသက် ကမ္ဘာသာမက စတြာဝဠာထက်ပိုကြီးတဲ့ အနန္တစတြာဝဠာ မကြေဘူးကွ။ ငါခံစားရတာထက် အဆပေါင်း ဘီလျံ ထရီလျံ အီလျံ ဇီလျံ ဂွီလျံ များစွာ ခံစားစေရမယ်။” ကမ္ဘာသိ ကြေငြာတယ် “မင်း…ကို…..ငါ……မုန်း.……ဒယ်။”
သို့သော် လောကဟူသည် ဆန်းကျယ်လှပေသည်။ ထို့ထက် ပိုဆန်းကျယ်သည်ကား အချစ် ဟူသောအရာပင် ဖြစ်သည်။ သမီးတော်ဂလေးနှင့် ရှင်ကွဲ ကွဲခဲ့ရသဖြင့် နေ့ရောညပါ မိုးလင်းမိုးချုပ် ကြေးမုံဂျီးအား မျက်မာန်ပွား အမုန်းကသိုဏ်းရှုနေရာ တနေ့သ၌ ဝုန်းဆို ကမ္မဌာန်းပေါက်သလို ဖြစ်သွားရာ ……ဘာဖြစ်သည် ထင်သနည်း။ ………………………………………..…… သူကိုယ်တိုင်ပင် မသိလိုက်ချေ။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် သိလာချိန်တွင်တော့ နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ၊ တားဆီးမနိုင် ထိန်းသိမ်းမရ ကြေးမုံဂျီးအား သူခြစ်မိနေလေဗျီ။ “ကြောင်ကြီး မင်းကိုယ်မင်း မလိမ်နဲ့၊ အချစ်နဲ့အမုန်းကို ဗစ်တိုးရီးယားစီးကရက် မော်ဒယ်လေးတွေဝတ်တဲ့ အတွင်းခံလို ပါးလွှာတဲ့ကြားခံ နယ်တခုက ပိုင်းခြားထားတယ်။ သိပ်မုန်းလွန်းလို့ သူ့ကို မင်း ခြစ်မိသွားပြီ။ မှန်ရာကို ဝန်ခံလိုက်တော့။” “နိုးနိုး ယူဘစ်ကက်၊ မဟုတ်ဘူး အသင်ကြောင်ကြီး၊ သူ့ကို မုန်းတယ်။ ကျုပ်ဘဝမှာ အမုန်းဆုံးရဲ့ အမုန်းဆုံး တောင် သူ့လောက်မုန်းမှာ ဟုတ်ဖူး။ အမုန်းတကာထိပ်ခေါင် အမုန်းဒေဝီ အမုန်းမဟေသီ အမုန်းဘုရင်မဂျီး..” စိတ်တွှင် ကိုယ်စောင့်နတ် တာဝိတိံသာကြောင်ကြီးနှင့် အချီအချပြောရင်း… ဦးကြောင်မျက်နှာ ပြုံးယောင် သန်းလာသည်၊ ထို့နောက် မုန်းရာမှ မုန် နောက်ဆုံး မုန့်သွားသည်။ ကြေးမုံဂျီးအား မမုန်းတော့၊ မမုန်းသည့်အပြင် စွဲမက်ဖွယ် နတ်သုဒ္ဓါမုန့်အဖြစ် မြင်သွားချေပြီ။ ပလိန်းအရပ်စကားနှင့် ဆိုရသော် ကြေးမုံဂျီးအား ခြစ်မိသွားခြင်းပေတည်း။
ကြောင်ကြီးအား ငယ်စဉ်က ကြေးမုံဂျီး အနိုင်ကျင့်နေဗုံ
ကြေးမုံဂျီးနှင့် ဦးကြောင်တို့နှင့် ရင်ဖိုလှိုက်မောဖွယ် လွဲချက်ကယ်မနာ စွန့်စားခန်း အပိုင်းနှစ်…မျှော်… :harr:
မှတ်ချက်။ နယ်အမှာစာ ပေးပို့လိုသူများ စာတိုက်သေတ္တာအမှတ် catlovesmirror သို့အမြန်ဆက်သွယ်ပါ။ ပြည်ပ ပရိတ်သတ်များအတွက် အမြန်ချောပို့စနစ် ဒီအိပ်ခ်ျအယ်လ်ဖြင့် အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ www.bigcat.thelover.com မှတဆင့် ဝယ်ယူမှာကြားနိုင်သည်။ အမေဇုံ၊ အီးဘေး လျှော့ဈေးအင်တာနက် အရောင်းဌာနများမှ လုံးဝ (လုံးဝ) ရောင်းချမည် မဟုတ်ပါ။ ထမင်းရှင် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးအား ကျေးဇူးဆပ် လိုပါသဖြင့် စီးပွားဖြစ် တဆင့်ပြန်လည် ရောင်းချရန်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင် အစစ်အမှန် ဖတ်ရှုမည့်သူများအား နားလည်မှု ရှိစွာဖြင့် ဦးစားပေးရန် အနူးအညွတ် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဦးကြောင်ကြီး ဗဲရီးဂွတ်ဒ်
ဒါပေသိ ဖတ်လို့ကောင်းတာ မကောင်းတာ နားလည်တာ နားမလည်တာနောက်ထား
အားတော့ပေးသွားပါတယ် အစကတော့ ကိုကြောင်းကြီးအတွက်ဆိုပြီး ငါးကြော်ယူလာခဲ့တယ်
အခုတော့ ကိုကြောင်ကြီးစာဖတ်လိုက်မှ ကျနော် ခေါင်းမှုးသွားလို့ ထန်းရေဆိုင်ကိုသွားပြီး
အမြည်းပဲလုပ်လိုက်တော့မယ် အပြန်မှာ ဇရက် တောင်ပံကျိုးလေးဘာလေးတွေ့ရင်တော့
ကျွတ် မုန်း ဝင်
ဖွတ် ပြုံး ချင်
ဇွတ် ကျုံး ကင်
လွှတ် အုန်း ခင်
အမုန်းဟန်တွေနဲ့ ကြေးမုံကြီးက ကျုံးကျုံးကန်တဲ့အခါ
အိုဘယ့် အနီရဲရဲလေး ပါလားဟရို့
ဦးသိန်းစိန်.အဲ..အဲ.. ကကြောင်ကြီး.. ဒီအတိုင်းသာ ဆက်လုပ်သွား…
ဒေါက်တာဘွဲ့တွေ..ဆုတွေ.. တန်းစီနေတော့မည်ဖြစ်ပါကြောင်း…။ :528:
ကြေးမုံဂျီးနှင့် ဦးကြောင်တို့နှင့် ရင်ဖိုလှိုက်မောဖွယ် လွဲချက်ကယ်မနာ စွန့်စားခန်း အပိုင်းနှစ်…ထုတ်ဝေမည့်
စာအုပ်တိုက်အား ထိုစာအုပ်ထုတ်လျှင် ဗုံးခွဲခံရမည့်ဟု ချိန်းခြောက်ခံနေရပါသည်။
အူးကြောင်တို့များ ခုချစ်လိူက် ခုမုန်းလိုက်နဲ့ တတ်လဲတတ်နိုင်တယ်။ ဟိုကဖြင့်သူ့ကိုအဖြေပြန်ပေးသေးတာမှုတ်ဖူး။ ပီးမှ အသဲကွဲဇာတ်လမ်းတွေပို့စ်လုပ်ရေးနေရအုံးမယ်။